Ukuzingela, Ukudoba kanye ne-Getaway ejabulisayo yomfula!
U-Toni uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Ibanga elinguhhafu wemayela ukusuka kumpambuko wesikebhe wase-Cow Creek, futhi ngaphansi kwemayela ukusuka e-Outpost Lodge nase-Spring Creek Marina. Inqwaba yezindawo zokupaka, ezifakwe kahle, futhi ezitholakala kahle ukuze usingathe uhambo lwakho lokuzingela noma lokudoba, noma uhambo olujabulisayo lomndeni eLake Oahe!
Kunamakamelo okulala ama-2 namagumbi okugeza angu-2 ezingeni elikhulu, kanye nekhishi, kanye negumbi lokudlela/indawo yokuhlala. Idekhi ingaphandle kwendawo yokuhlala. Izinga eliphansi linelinye igumbi lokulala negumbi lokugezela, kanye nenye indawo enkulu yokuhlala. Kukhona igalaji elinendawo eyodwa kanye nomgwaqo ogandayiwe, nendawo eningi yokupaka izikebhe, izimoto, njll.
I-townhome yethu itholakala endaweni ye-de-sac enelinye nje ikhaya elilodwa lokuhlala endaweni yokujika. Kunezindawo zokudlela ezimbili ezinebha egcwele nezinketho zokudlela endaweni eyimayela, kanye nesitolo esikahle esinegesi nezinto eziyisidingo okungenzeka ukuthi uzikhohliwe ohambweni lwakho. Kukhona nezinketho zokudoba ogwini ngaphakathi kwebanga lokuhamba futhi!